“37 dacwadood ayaan gudbiyay, qofna lama soo xirin” | Somaliska
“37 dacwadood ayaan gudbiyay, qofna lama soo xirin”
Ninka lagu magacaabo Prince Hassan Saad oo ku nool magaalada Borås ayaa wargeyska ETC uga waramay isbuucii hore dhibaatada kala haysata isaga iyo cunsuriyiinta. Isagoo sheegay in booliska uu u gudbiyay 37 dacwadood oo ka dhan hanjabaado iyo dhibaatooyin kale oo ay ku hayaan cunsuriyiinta.
Hassan Saad ayaa sheegay in weerar joogto ah lagu hayo, isagoo dhagaxaan lagu tuuray isla markaana xitaa dab la qabadsiiyay gurigiisa. Waxaa sidoo kale internet-ka lagu faafiyay sawirkiisa iyadoo boggaga cunsuriyiinta ay soo qoreen magaciisa iyo waxyaabo badan oo ku saabsan oo qaarkood oo ay soo qoreen in uu argagixiso yahay. Waxa uu sheegay in xitaa caruurtiisa internetka loo soo marsiiyay hadalo aflagaado ah.
Iyadoo waxaas oo dhib ah lagu hayo, ayuu Hassan Saad booliska si joogto ah dacwad ugu gudbiyay, isagoo guud ahaan sameeyay 37 dacwadood balse booliska ayaa dhagaha ka fureystay eedeymahiisa, iyagoo durbiiba xiray dacwooyinkiisa oo aan cidna u soo xirin ama ku eedeyn dambiyada laga galay.
“Waa fiicnaan lahayd haddii qof la maxkamadayn lahaa, maadaama dad badan ay aaminsanyihiin in aan waxba laga qaadi karin oo aan waxba ku dhacayn” ayuu wargeyska u sheegay.
Ka dib markii isbuucii hore uu telefishinka SVT soo qaaday arinta ku dhacday Hassan Saad ayaa boolisku hada sheegeen in ay dib u eegayaan dacwadihii uu soo gudbiyay.
Hassan Saad ayaa ka cabsi qaba in Sweden ay ku socoto wadadii Germany ay ku socotay sanadihii 1930 halkaasoo dadka Yuhuuda cunsuriyad badan lagu sameyn jiray balse siyaasiyiinta iyo boolisku aysan waxba ka qaban ee ay qeyb ka ahaayeen dhibaatada. Isagoo aaminsan hada in Muslimiinta iyo dadka Afrikaanka ah ay joogaan booskii Yuhuudu ay ka joogeen Germany.
Weerar kale oo mindi ah oo ka dhacay maanta Norrköping
La daabacay kl 15.49
Ett stort område runt stadsbiblioteket och Södertull är avspärrat. Foto: Andreas Åsenheim/Sveriges Radio
Saddex qof ayaa dhaawacyo kalo gedisan soo gaareen ka dib markii nin mindi ku hubeysani uu weeararey dad marayey bartamaha magaalada Norrköping.
Weerarakan ayaa waxaa ku dhaawacmay labo dumar ah oo da’dooda kalo tahay 21 jir iyo 40 jir, sidoo kale waxuu dhawac culus soo gaaray nin 24 jir ah. Dhamaan dadkan waxaa loola cararay isbitaalka.
Weerarka waxuu dhacay maanta saacaddo markey ku beegneyd 11:30 maalinimo. lama garanayo sababta ka denbeysa weerarkan laakiin waxaa jira warar sheegay ninka weeraray dad aan waxba ka galabsan oo waddada iska marayey.
Ninka weerarka geystay ayaa goobta ku sugnaa tan iyo inta ay booliska goobta ka soo gaarayeen balse marka uu booliska arkay ayuu isku deyey in uu cararo, laakiin gacanta ayaa lagu dhigay sida ay werisay laanta P4 Östergötland.
Illaa iyo hadda booliska wax faafaahin ah kama baxin weerarkan saddexda qof lagu dhaawacay
ninkaan asiga ayaa ah nin khariban oo dadka dacweeya sabab la,aan xataa soomaalida ayuu been ku dacweeya waana la yaqaan ee ha aaminina warkiisa.
Ilaahay haynagu xafido dhulkaan cabsibaba nadishee
Wixii calaamad islam ah kacarar. Markaa si wanaagsan ayaad ugu noolaanaysaa Sweden. Xataa bedel magacaaga. Muxuu kuuhayaa magac aadan magan gelyo uga Heleyn Saudi arabia iwm. Iska tuur dhaqankooda iwm. Qaado dhaqanka wanaagsan ee europe ama Africa. Markaa horumar baad gaari.
Laakiin intaa daba joogto kuwaas waxba kaahari maayaan.
Fikrad aan lala dhicin 0 18
subxaanlaah cabdiwali ilaahy haku soo hadeyo walal cidna ha shabhina oo ha isku darina raaca dariiqa tosane sunda nabigena scw walalyaal hadaynu nahay somaali waxaan ku dhalny diinteena mcaan e islaamka idinkoo aan cidna dhib u gaysan allaaha idinku nabd yeelo mel kastoo aad tagtaaan markste qofkii dona ilaahy raali ahaan shahiisa waa guuulysnyaa laakiin gaaal iska dhig si aad u bad baado caadabta aallaah baa u taaal somaaliyey wadnkiinii baaa cidlee u soo laabta please
Asc. Waxaa u maleenaa in ee san jirin cid sidaas dhan uraadsaneyso kaligii. Lkn waxaa suurta gal ah in uu isku buuqay oo u bahan dawo wcs
WIXI LADALAA HALA DILO WAXAA IGU BALAM AH INAAN KUSII TAAGNAADHO MAXAMUUD OONA BEDELIN DHAQANKAYGA SUUBAN. ABDIWELI MADAXAAD DEBKARABTAA MEEQOOW IIGU FADHA MATAQAAN MAGACA AAD BEDEL LEEDAHAY 30 QAALMOOD OO GEL AHAA LAGA BAXSHAY GAALADU KAAMA XOOG BADNO QANIINYO QANIINYAA KA FUJISO EE ISKA DHICI HADII POLISKU WAXKA QABAWAAYAY.
aniga waxaan leyahay ninkaan 5 kamera yar yar oo qarsoon hasoo iibsado dabadeedna mid dhabarka haku xirto, midna xabadka, labana garbaha, xabada kalena madaxa koofiyada korkiisa hahahahaha. markaas marqaati cad ayuu haystaa